Militariga Sudan oo hakiyey wada-hadalladii rayidka – Banaadir weyne
Agaasimihii Wasaaradda Amniga Oo Shaqo Joojin Lagu Sameeyay
Militariga Sudan oo hakiyey wada-hadalladii rayidka
Golaha Milatari ee hadda haya talada dalka Sudan ayaa joojiyay wadahadallo ay kula jireen hogaanka dibad-baxayaasha, kaddib marki ay sideed qof ku dhaawacmeen iska hor-imaad Arbacadi magaalada Khartoum ku dhexmaray ciidanka amaanka iyo dad bannaan baxayay.
General Abdel Fattah al-Burhan ayaa Khamiista maanta ah ku dhawaaqay in wadahadallada lagu soo dhisayo dowladda kumeel gaarka ah la hakiyay muddo 72 saacadood ah, sababo la xariira dhiiga ku daatay shalay magaalada Khartoum.
Isku dhici Arbacadi ayuu jeneraalka ku eedeeyay kooxaha mudaaharaadka wada, kaddib marki ay diideen in ay qaadaan jid-gooyo ay dhigeen waddo muhiim ah oo ku taallo caasimadda.
Jid gooyooyinka yaalla qeybo ka mid ah magaalada Khartoum ayaa la dhigay bishi hore, xilligaas oo ay waddooyinka joogeen dad aad u fara badan oo dalbanayay inuu xakunka ka dago madaxweynihi hore Cumar Al Bashir.
Milatariga ayaa 11-ki April soo afjaray 30 sano oo uu Sudan soo xakumayay jeneral Cumar Xasan Al Bashir. – VOA Somali News
Rasaas Laga Maqlaayo Xarunta Loogu Tala Galay Shirka Dib U Heshiisiinta Galmudug
Maamulka Gobolka, Ciidamada Dowladda Iyo Kuwa AMISOM Oo Hiiraan Uga dhawaaqay Dagaal Ka Dhan ah Al-Shabaab
Wasaaradda Arrimaha Gudaha XFS Oo Sheegay Inaysan Aqoonsaneyn Natiijo Kasta 0o Ka Soo Baxdo Doorashada Jubbaland
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland Oo Goor Dhaw La Doortay
Saddex Qodob Oo Uu Ku Khaldanaa Dilkii Shalay Ka Dhacay Suuqa Bakaaraha
Wasiir Goodax Barre Oo Bogaadiyey Talaabaddii Ciidanka Ka Qaadeen Argagaxisadii Shalay Isku Dayey Inay Dilaan Lataliye Wasaaradda Katirsan